भिडियोकै आधारमा रवि लामिछाने प*क्राउ पर्दा महरा किन नपर्ने : ठूला-ठालुलाई कानुन लाग्दैन? – Life Nepali
भिडियोकै आधारमा रवि लामिछाने प*क्राउ पर्दा महरा किन नपर्ने : ठूला-ठालुलाई कानुन लाग्दैन?
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका नेता धनराज गुरुङले कृष्ण बहादुर महरा प्रकरणमा महिलाले बयान फेर्नु शं’कास्पद रहेको बताएका छन्। बुधबार अन्तर्वार्ता दिँदै गुरुङले पीडित महिलाको बयानको भिडियो बाहिर आएको एक दिन नबित्दै बयान फेरिएको विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने बताएका छन्। प्रमाणसहित मिडियामा आइसकेको र यसैको आधारमा महराले राजिनामा दिसकेको हुँदा गम्भीर भएर घ*टनाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने गुरुङले बताएका छन्। पत्रकार सालिकराम पु’डासैनी प्र*करण कुनै किटानी जाहेरी बिना भिडियोकै। .
आधारमा रवि लामिछाने प*क्राउ परेको उल्लेख गर्दै गुरुङले महरा माथि पनि अनुसन्धान थालिनुपर्ने बताएका छन्। पिडित भनिएकी महिलाले दबाबमा आएर बयान फेरेको हुन सक्ने गुरुङको अनुमान छ। गच्छेअनुसार ललाई, फकाई, लोभलालच देखाई, ड*र, त्रा*स, द*बाब आदि जुनसुकै हर्कत गरेर बयान फेर्ने चलनले गर्दा यस्ता घ’ट्नाहरु झन्झन् बढ्दै गइराखेको उनले तर्क गरेका छन्। महरा प्र*करणमा राज्यको एउटा सम्मानित पदमा रहेको व्यक्ति जोडिएकोले यसलाई छिटोछिटो छा*नविन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
यो पनि पढ्नुहोस – वि*वादित रोशनी शाहीको दशैंको मुखैमा स*म्बन्धविच्छेद !
निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई ब*लात्कारको आ*रोप लगाउने महिला रोशनी शाहीले आफ्ना पतिसँग स*म्बन्ध वि*च्छेद गरेकी छिन् ।उनका पति चित्रजंग शाहीका अनुसार उनी र पत्निबीचको सम्ब*न्ध वि*च्छेद भएको हो ।उनीहरुले स*म्बन्ध वि*च्छेदको पत्रमा ह*स्ताक्षेर गरेका छन् ।‘प्रीय जनहरु, थुप्रै उतार च*ढावका बीच वितेका हाम्रा साथसाथ २८ वर्ष दिनहरु वि*ते । समयको गतिसँगै अ*सहमति अ*सन्तुष्टि आउँदा रहेछन् । तथापी खुशी साथ अलग बस्ने नि*र्णय गरेका छौा । का*नुनी प्रक्रि*या नि*रन्तरताका साथ’ स*म्बन्ध वि*च्छेद पत्रमा भनिएको छ ।
Previous नयाँ सभामुखमा फेरि सुवास नेम्वाङको चर्चा शुरू
Next प्रचण्ड बिना अरुले देश बनाउन सक्दैन: प्रचण्ड दक्षिण एशियाकै राजनेता हुन् – ऋषि धमला